Ukuxhaswa kwabaFundi abaNcedisayo okanye iimvakalelo ezikhusela ukuPhumelela kwezemfundo
Iziphazamiso zokuziphatha nezomvakala ziwela phantsi kweerubrikhi "Ukuphazamiseka Kwengqondo," "Inkxaso Yengqondo," "Inzima Emotionally Challenged," okanye ezinye izibhengezo zelizwe. Ukuphazamiseka Kwengqondo "yinto echazayo yokuziphatha nokukhathazeka ngokomzwelo kuMthetho we-Federal, Abantu abaQhubayo ngezeMfundo (IDEA).
Ukuphazamiseka kwemizwelo yileyo eyenzeka ngexesha elide kunye nokukhusela abantwana ukuba baphumelele kwimfundo okanye kwintlalo kwisimo esikolweni.
Zibonakaliswe enye okanye ngaphezulu kwezi zinto zilandelayo:
Ukungakwazi ukufunda ukuba akunakucaciswa ngongqondo, kwintetho, okanye kwimpilo.
Ukungakwazi ukudala okanye ukugcina ubudlelwane obuhle kunye noontanga nootitshala.
Iimpawu ezingafanelekanga zokuziphatha okanye iimvakalelo kwiimeko eziqhelekileyo okanye kwimeko.
Imvakalelo ephakazelisayo yokungonwabi okanye ukudandatheka.
Iziganeko eziqhelekileyo zezibonakaliso zomzimba okanye ukwesaba ezinxulumene neengxaki zomntu okanye zesikolo.
Abantwana abanikezwa i-ED "ukuxilongwa" bafumana imfundo ekhethekileyo ngenkxaso ngexesha bethatha inxaxheba kwimfundo jikelele . Nangona kunjalo, abaninzi banokufakwa kwiiprogram ezizimeleyo ukuze bafumane izakhono zokuziphatha, ezentlalo nezengqondo kwaye bafunde izicwangciso eziza kubancedisa ukuba ziphumelele kwizicwangciso zemfundo jikelele. Ngelishwa, abantwana abaninzi abane-diagnostic of Disturbance emotion bafakwa kwiiprogram ezizodwa ukuzisusa ezikolweni zengingqi ezihlulekile ukuhlangabezana neemfuno zabo.
Ukukhubazeka kweziphathamandla yizo ezingenakubangelwa zizifo zengqondo ezifana nokudakumba okukhulu, i-schizophrenia, okanye iziphazamiso zophuhliso ezifana ne-Autism Spectrum Disorders. Ukukhubazeka kokuziphatha kuboniswe kubantwana abaziphatha kwabo kubavimbela ekusebenzeni ngokuphumelelayo kwizicwangciso zemfundo, ukubeka abo okanye oontanga babo engozini, nokubathintela ukuba bathathe inxaxheba ngokupheleleyo kwinkqubo yezemfundo jikelele.
Ukukhubazeka kokuziphatha kuyahluka kwiindidi ezimbini:
Ukuphazamiseka kokuziphatha: Kwimiqathango emibini yokuziphatha, Ukuziphatha kweengxaki kubaluleke ngakumbi.
Ngokwe-Diagnostic and Statistical Manual IV TR, Ukukhubazeka kokuziphatha:
Inkalo ebalulekileyo yokuziphatha kwengxaki yindlela yokuphindaphinda nokuqhubekayo yokuziphatha apho amalungelo angundoqo yabanye okanye amazinga afanelekileyo asekuhlaleni amanqanaba okanye imimiselo echaphazelekayo.
Abantwana abanenkinga yokuziphatha bavame ukufakwa kwiiklasi ezizodwa okanye iinkqubo ezizodwa baze baphuculwe ngokwaneleyo ukubuyela kwiiklasi eziqhelekileyo zemfundo. Abantwana abanenkinga yokuziphatha bahlaselayo, banobuhlungu abanye abafundi. Abayinyanisi okanye bayichasa ukulindela okuqhelekileyo kokuziphatha, kwaye kaninzi
Ukuxhatshazwa kweengxaki eziphikisanayo Ukungaxhatshazi kakhulu, kunye nobudlova kunokuba kuphazamise ukuziphatha, abantwana abaneenkcaso zokuchasana nokuxhatshazwa bahlala bengabikho, abaphikisanayo nabangenayo. Abantwana abanenkcaso yokuchasana abaxhatshazi, abanobundlobongela okanye abonakalisayo, njengabantwana abanenkinga yokuziphatha, kodwa ukungakwazi kwabo ukusebenzisana nabantu abadala okanye oontanga bahlala bebahlukanisa kwaye kubangela ukuba kubekho impembelelo enkulu ekuphumeleleni kwezenhlalakahle nakwezemfundo.
Ukubandezeleka kokubili kokuPhatha kunye neNkcazo yokuChoxiswa kweNtsholongwane kufunyanwe kwizingane ezingaphantsi kwe-18.
Abantwana abaneminyaka engaphezu kwe-18 bavandlakanywa ngokungafunekiyo okanye ukungabikho kwezifo zobuntu.
Uninzi lweengxaki zengqondo nazo ziyafaneleka abafundi phantsi kodidi lwe-IDEA lweengxaki zoMoya. Kufuneka sikhumbule ukuba amaziko emfundo awaxhotywanga ukuba "aphathe" ukugula kwengqondo, kuphela ukubonelela ngeenkonzo zemfundo. Abanye abantwana babonwa kwiziko lezonyango zengqondo (izibhedlele okanye iiklinikhi) ukuze kunikwe unyango. Abantwana abaninzi abaneengxaki zengqondo bafumana unyango. Kwiimeko ezininzi, ootitshala ababonelela ngeenkonzo ezizodwa zemfundo okanye ootitshala abakwii-classroom zokufundela abaya kubafundisa, abanikwe ulwazi, oluyimfihlo yonyango.
Uninzi lwezifo zengqondo azifumaneki ukuba umntwana angaphantsi kwe-18.
Ezi zifo zengqondo eziphantsi kokuphazamiseka kwengqondo zibandakanya (kodwa azikhawulelwanga):
I-Bipolar (ukudakumba kwengqondo)
Ubume obungalunganga obuphambanisayo
Xa le miqathango ibangela nayiphi na imingeni echazwe ngasentla, ekungenakwenzeka ukwenza imfundo kwiziganeko zesimo somzimba okanye ukwesaba ngenxa yeengxaki zesikolo, ngoko abafundi bafuna ukufumana iinkonzo zemfundo ezizodwa, ngamanye amaxesha ukuba bafumane imfundo yabo eklasini ekhethekileyo. Xa ezi ngxaki zengqondo zihlala zidala iingxaki kumfundi, zinokuqwalaselwa kunye nenkxaso, indawo yokuhlala kunye nemfundo ejoliswe ngokukodwa (i-SDI).
Xa abafundi abaneengxaki zengqondo bebekwe kwigumbi lokufundela ngokwabo, baphendula ngokufanelekileyo kwizicwangciso ezincedisa ukuphazamiseka kokuziphatha, kuquka iinkqubo, inkxaso yokuziphatha kakuhle, kunye nemfundiso eyahlukeneyo.
Qaphela: Eli nqaku liye lahlaziywa yiBhodi yethu yokuBoniswa kwezoBucala kwaye libhekwa njengelichanekileyo ngempilo.
Inkcazo yeHeterogeneous kwiKlasi
Okuqhelekileyo kwaye "Akuqhelekanga"
Ziziphi ezinye iiNtsebenzo kunye neNgqungquthela yeMigangatho yesiGaba yoLuntu oluPhakathi?
Inkqubo yeAerification kwiGalofu: Njani kwaye Kutheni kwenziwa
Isicatshulwa esicacileyo seNtshukumo yokuThuthuka
Yintoni i-Easter Orthodox?